Dancing with Caesar Cipher [Python] – EFM – Luna M00n
Written by lunam00n March 10, 2016
Dancing with Caesar Cipher [Python]
Hello Ladies …..
ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်တို့တွေ နောက်တစ်မျိုးလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ ။ Invent with Python ဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျနော် MSF ထဲက ဘရိုတစ်ယောက် L0V3R က ဖတ်ကြည့်ဖို့အခြားတစ်ယောက်ကိုအကြံပေးတာတွေ့တာနဲ့ပဲ ဒါလေးတွေရေးလို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဦးစွာပထမအနေနဲ့ ခုလိုစာအုပ်ကိုအကြံပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ python ဗျ။ ဒါကိုတော့ကျနော်က ဖိုရမ်ထဲမှာပဲ python အကြောင်းနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိတဲ့ Hades.y2k ကိုသွားမေးတယ် အခြေခံကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲပေါ့။ သူပြောပြခဲ့တာလေးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပြောရဦးမယ် အရေးကြီးတာလေးတစ်ခုလောက်။ ဒါကတော့ ဘာလို့ python ကိုကျနော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးပေါ့။ တကယ်တော့ကျနော်အမြင် ကျနော့်ယူဆချက်ဆိုပါတော့။ ကျနော်များသောအားဖြင့် CTF တွေကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်။ Crypto Challenge တော်တော်များများကို C (or) Python ကိုသုံးပြီးဖြေကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်ကတော့ python ကိုရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြား programming လေ့လာပြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ python ကို တကူးတကလိုက်လုပ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ရထားတဲ့အရာနဲ့လည်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကျနော်ဒီ Crypto တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး python basic ကိုပဲလေ့လာထားတာကြောင့် python နဲ့ပဲလေ့လာရတာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ကျနော့်မှာလည်း ဟိုတစ်ယောက်ပေးထားတဲ့စာအုပ်က python ပဲသုံးထားတာကိုး ။ အဲဒီ original link ကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ ကျနော်ရှင်းတာနားမလည်ဘူးဆို သွားဖတ်နိုင်အောင်လို့ပါ။ ကျနော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကိုယ်လည်းမှတ်မိ သူများလည်းဖတ်ချင်ဖတ်လို့ရအောင်ရေးထားလိုက်ပြီ။
Why old cipher?
တချို့ကစောဒကတက်ချင်တက်နိုင်တယ်ဘာကြောင့် အဟောင်းတွေနဲ့လုပ်ရတာလဲပေါ့ ။ ဟုတ်တယ် ကျနော်ကတော့အဟောင်းတွေကပဲစတယ်။ အဟောင်းတွေကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ နားလည်လွယ်တယ် မခက်သေးလို့လေ။ ဒီလိုပဲ အောက်ကနေတက်မှရမယ်လို့ယူဆတယ်။ အောက်ခြေပိုင်ခဲ့ရင် ဒီထပ်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကျကျနော်တို့ သူများထက်စာရင် နားလည်လွယ်မှာပါ။ Logic ကိုသိနေတာကိုး။ မြန်မာလိုဆို အထာတွေသိနေတယ်ပေါ့ ။
Crypto Day 1 မှာ Caesar Cipher အကြောင်းပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ Shifted Cipher လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ Code အကြောင်းအဓိက လေ့လာမှာမလို့ Theroy တွေသိပ်မပြောတော့ဘူး။ စလိုက်ကြရအောင် စလိုက်ကြရအောင် (J-me အသံဖြင့်) ……
· The upper() string method
· if, elif, and else statements
· The find() string method
ဒီ သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျနော်တို့ python နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အပေါ်က ဟာလေးတွေကိုသိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။
6. # the string to be encrypted/decrypted
7. message = ‘This is my secret message.’
9. # the encryption/decryption key
10. key = 13
12. # tells the program to encrypt or decrypt
13. mode = ‘encrypt’ # set to ‘encrypt’ or ‘decrypt’
15. # every possible symbol that can be encrypted
16. LETTERS = ‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ’
18. # stores the encrypted/decrypted form of the message
19. translated = ”
21. # capitalize the string in message
22. message = message.upper()
24. # run the encryption/decryption code on each symbol in the message string
25. for symbol in message:
26. if symbol in LETTERS:
27. # get the encrypted (or decrypted) number for this symbol
28. num = LETTERS.find(symbol) # get the number of the symbol
29. if mode == ‘encrypt’:
30. num = num + key
31. elif mode == ‘decrypt’:
32. num = num – key
34. # handle the wrap-around if num is larger than the length of
35. # LETTERS or less than 0
36. if num >= len(LETTERS):
37. num = num – len(LETTERS)
38. elif num < 0:
39. num = num + len(LETTERS)
41. # add encrypted/decrypted number’s symbol at the end of translated
42. translated = translated + LETTERS[num]
45. # just add the symbol without encrypting/decrypting
46. translated = translated + symbol
48. # print the encrypted/decrypted string to the screen
51. # copy the encrypted/decrypted string to the clipboard
ဒါလေးကတော့ Original Source Code ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ code ကို အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် pyperclip ဆိုတဲ့ module ကို download ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ http://invpy.com/pyperclip.py မှာလုပ်ပါ။
caesar.py ဆိုပြီး အပေါ်က ကုတ်ကို သိမ်းထားလိုက်မယ်။ pyperclip ကိုလည်း directory တစ်ခုထဲမှာထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခြေခံရပြီးသားလို့တော့ယူဆပါတယ်။ import က python မှာ module တွေကိုခေါ်သုံးတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ pyperclip ကိုခေါ်သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ copy / paste နဲ့ဆိုင်တဲ့ functions တွေပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးမှာ pyperclip.copy(translated) ဒီလိုမျိုးပြန်သုံးဖို့အတွက်ဆိုပါတော့။
ဒီအပိုင်းမှာကတော့ variable တွေကိုကြေညာထားတာတွေ့ရမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ အဓိကအချက်သုံးချက်ပဲရှိပါတယ်။ Message ရယ် shifted လုပ်ထားတဲ့ key ရယ် decrypt or encrypt ဒါပဲရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့စာသားကို message variable ထဲကိုထည့်ခဲ့တယ်။ key = 13 ဆိုတော့ 13 shifted လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ encrypt or decrypt ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ထားခဲ့နိုင်တယ်။
ဒီအကြောင်းကတော့ ကိန်းသေထားခဲ့တဲ့သဘောပါ။ character 26 လုံးကို letters ဆိုတဲ့ variable ထဲကိုထားခဲ့တယ်။
translated ဆိုတဲ့ variable ကိုတော့ encrypt 0r decrypt လုပ်ပြီးရမယ့်ဟာကို သိမ်းဖို့ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုပါတော့။ ကျနော်တို့က LETTERS ဆိုတဲ့ ထဲမှာ စာလုံးအကြီးတွေချည်းပဲသိမ်းခဲ့တာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ message ထဲက စာတွေကိုလည်း စာလုံးအကြီးတွေပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ upper() / lower() ဆိုတဲ့ string method က python မှာတော့ စာလုံးအကြီး အသေးချိန်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။
for loop ကိုအသုံးပြုထားတာပါ။ for loop ရဲ့ဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်နားလည်မှာပါ။
>>> for letter in ‘Howdy’:
… print(‘The letter is ‘ + letter)
for symbol in message: ဆိုတတော့ symbol ထဲမှာ ကျနော်တို့ message variable ထဲကစာသားတွေဟာ အထက်ကဥပမာလိုမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့။
ဒါတော့ ဒီ ကုတ်တစ်ခုလုံးမှာနည်းနည်းရှုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့။ အပေါ်တစ်ပိုင်းကတော့ LETTERS ဆိုတဲ့ variable ထဲက ကျနော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ character 26 လုံးထဲမှာ လက်ရှိ symbol ထဲရောက်နေတဲ့ character လေးပါခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်ပေါ့ ။
space , numbers , symbol တွေကလွဲရင် ကျိန်းသေတာကတော့ Character 26 လုံးထဲကပဲဆိုတော့ ပထမအပိုင်းစအလုပ်လုပ်တော့မှာပေါ့ ။
num = LETTERS.find(symbol) ဒါလေးစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ num ဆိုတဲ့ variable ထဲကို LETTERS ထဲမှာ symbol ရဲ့ ရောက်နေတဲ့ number ကို find() method ကိုသုံးပြီးတော့ရှာပြီးထည့်ခဲ့မယ်။ ဥပမာ symbol > i ဆိုရင် လက်ရှိ num ထဲမှာ9ဖြစ်နေပြီ။
ဒီနေရမှာမှာ နောက်ထပ် condition တစ်ခုလာပြီ ။ if mode == ‘encrypt’:
mode ဟာ encrypt နဲ့ညီနေမယ်ဆိုရင် num = num + key ဆိုရင်ဆိုတဲ့အခြေနေမှာ (e.g . i) num ဟာ9key = 13 ဖြစ်တာကြောင့် အခုဆို num ထဲမှာ 22 ဖြစ်သွားပြီ။
elif mode == ‘decrypt’:
num = num – key
ဒီအခြေနေမှာဆိုရင်တော့ num = 9-13 ဖြစ်သွားမယ်။ တန်ဖိုးက -4 ဖြစ်သွားပြီ။
ဒီအပိုင်းကတော့ num ဟာ 1 to 26 အတွင်းဆိုဘာပြသနာမှမရှိပေမယ့် 26 ထက်ကြီးသွားတယ်။0ထက်ငယ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအပိုင်းကလိုအပ်လာပါပြီ။ len(LETTERS) ဆိုတာ LETTERS ရဲ့ 26 ကိုဆိုလိုတာပါ။ အပေါ်မှာတုန်းကလို အနှုတ် ၄ ရပြီဆိုရင် num = -4 + 26 >>> num = 22
ဒါကတော့ translated ဆိုတဲ့ var ထဲကို translated + LETTERS[num] ဆိုတော့ကာ translated ထဲကို အစတည်းကရှိနေတဲ့ translated value ရယ် LETTERS var ထဲက num တန်ဖိုးရောက်နေတဲ့ character ရယ်ထပ်ထပ်ပေါင်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါဆိုအပေါ်တစ်ပိုင်းကပြီးပြီ။
ဆိုတော့ကာ ဘာမှထူးထူးခြားခြားမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရောက်နေတဲ့အတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တာ။ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဟာ white space လေးတာထုတ်ပေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမလားပဲ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ translated ကို print ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။
pyperclip ကိုတော့ clipboard မှာ translated ကို copy ကူးဖို့အတွက် သုံးထားပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျနော်နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ပါတယ် ။ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေးပေ့ါ။ နည်းနည်းလေး user friendly ဖြစ်အောင်ပြောမလား။
print “Enter your secret message”
message = raw_input(‘>>’)
print “Enter your method (encrypt or decrypt)”
mode = raw_input(‘>>’)
if mode == ‘encrypt’:
if num > len(LETTERS):
num = num -len(LETTERS)
num = num +len(LETTERS)
print “Cipher text for %r >> %r” %(message,translated)
Best Regard , Thin Ba Shane
Posted in Uncategorized.Tagged Cryptanalysis, Cryptography.
2 thoughts on “Dancing with Caesar Cipher [Python]”
key ကို ကိန်းသေ မထားပဲနဲ့
“key = int(raw_input(‘Type Secret Key : ‘))”
တစ်ချို့ challenge တွေကျတော့ rot က ဘယ်လောက်မှန်းမသိဘူးလေ အဲ့တော့
1-25 ကို bruteforce တိုက်သလိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ် အကို
(tab) translated = ''
(tab) message = message.upper()
(tab) for symbol in message:
(tab) other code
Keep Moving Bro 😀
Thanks for suggesting xD I forget this.
Tomorrow , i will write about bruteforcing caesar cipher .
Previous Post The Art of Enigma Machine [Explained]
Next Post Frequency Analysis [Code:Breaker]